Home » News » FANAZAVANA AN'I FREESPEAK II FAMPIHAVANANA MANDRAKARIVA TAMIN'NY LASAN'I ED SHEERAN 'TOUR
FANAZAVANA AN'I FREESPEAK II FAMPIHAVANANA MANDRAKARIVA TAMIN'NY LASAN'I ED SHEERAN 'TOUR
Clear-Com® dia nanambara androany fa ny vahaolana amin'ny aterineto Wireless FreeSpeak II nomena azy dia manohana ny fitsangatsanganana maneran-tany nataon'i Ed Sheeran (Divide) mba hamoronana tambajotra azo antoka. Ny rafitra dia nofaritana sy napetraky ny Autograph Sales & Installation avy any London, ary natolotr'i Tyrell, Clear-Comny mpaninjara any Angletera.
Ny Ben Tredwell Autograph, izay efa nanolotra fitaovana hafa an-tsehatra ho an'ny orinasam-pambolena Anglisy Major Tom ho an'ny fitsidihana, dia nahazo fangatahana hanampy amin'ny fanavaozana ny lalam-panorenana amin'ny rafitra comms. Tredwell nandamina ny fihetsiketsehana Clear-Com FreeSpeak II rafitra ao amin'ny concert of Sheeran's Manchester, ary navoaka ary nanampy tamin'ny fananganana ny fananganana farany tao amin'ny fampisehoana Newcastle, tapa-bolana taty aoriana.
Ny fonosana farany - izay mihazakazaka amin'ny banditry ny hafan'ny 1.9GHz DECT - dia ahitana valisoa valo FreeSpeak II, base station iray Base II, four Active Transceiver Antennae miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny batteries, ny chargers ary ny kofehy.
Dave White, RF SheCHeran Ed Sheeran, dia nilaza hoe, "Ny fahafahana manana 'Demokrasia maimaim-poana' avy amin'ny Autograph dia tena ilaina mba hahitana raha Clear-Com Ny rafitra dia mety ho an'ny ekipa mpitsangantsangana sy ny fomba fitsapana efa nodinihina ary efa notsorina tamin'ny fandrindrana ny famokarana Ed. Mila manana fifandraisana mazava ao amin'ny departemanta isika ary koa fandrindrana iraisam-pirenena mba hahafahany mitantana ny fiovana farany amin'ny minitra izay mety hitranga amin'ny fampisehoana.
"Ny fananana Ben teto an-toerana nandritra ny roa andro dia tena zava-dehibe tamin'ny fametrahana haingana ny rafitra. Izy dia nanampy anay hampifanaraka ny fandaharam-potoan'ny comms amin'ny tambajotra misy anay ary nanome toro-hevitra tsara momba ny fametrahana sehatra maro. Taorian 'ny fampidirana ny androany dia napetraka ny baiko, ary tao anatin' ny herinandro dia natolotr 'i Ben manokana ny fitaovana vaovao napetrakay. "
Tredwell dia nanamarika hoe: "Ny rafitra FreeSpeak II dia manome valiny tsaratsara kokoa noho ny teo aloha - tsy vitan'ny hoe manome azy ny fahafaha-manatena ilainy izy ireo, fa ny singa ao amin'ny vondrona dia mamela azy ireo hanana ekipa isan-karazany mifampiresaka, raha toa ka manana mpampiasa hafa fifanakalozan-dresaka samirery. "
Nicki Fisher, Talen'ny varotra EMEA, Clear-Com, hoy izy, "Ny fitadiavana ny fitaovana mety hikorontana amin'ny fitsidihana manerantany dia mety ho sarotra, indrindra raha efa mandroso ny fizahantany. Noho ny fahaizan'ny Autograph sy ny fahaizan'ny FreeSpeak II rafitra, ity dingana ity dia haingana sy maivana ary azo atao ho an'ny ekipa mpamokatra. "
Hong Kong’s Xiqu Centre for the Chinese Opera Uses Clear-Com for Accurate Communications - Janoary 22, 2019
Signiant Celebrates Unprecedented Growth in 2018 Increasing its Massive Media Footprint as the Company Moves Beyond File Transfer - Janoary 16, 2019
Cooke Anamorphic/i SF 65mm MACRO Brings A Star Is Born Up Close and Personal - Janoary 16, 2019
Clear-Com fifandimbiasam-peo dizitaly FreeSpeak II LIVE + Spears & Arrows	2018-11-07
Previous: Platinum Tools® dia manambara New Patch Panel vaovao; Ankehitriny azo
Next: Fihaonana ny mpihaino mivantana - Mpilalao, mpilalao, mpankafy - raha izao no izy